पशुपतिनाथमा ‘कलि’को मूर्ती पुरै निस्किएपछि संसार ध्वस्त हुने ! - Nepal Insider
Home/समाचार/पशुपतिनाथमा ‘कलि’को मूर्ती पुरै निस्किएपछि संसार ध्वस्त हुने !
पशुपतिनाथमा ‘कलि’को मूर्ती पुरै निस्किएपछि संसार ध्वस्त हुने !
हिन्दूकाशास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार ब्रम्हाण्डमा चार ओटा युग हुन्छ । पहिलो सत्य युग दोस्रो द्वापर युग तेस्रो त्रेता युग र चौथो कलि युग । हिन्दुलाई मान्ने हो भने अहिलको सयम कलियुग अन्तर्गतको कालखण्ड हो । जसलाई शास्त्रले अन्तिम युग भनेको छ ।
तर, विभिन्न पुराणहरुमा युगहरुको समय फरक फरक उल्लेख छन् । चार युग मध्येको पहिलो युग सत्य युग हो । धर्मशास्त्रहरुमा कलियुगपछि पुनः सत्य युगको शुरुवात हुने उल्लेख छ ।
कलियुग को आरम्भ
कलि युगको अन्त्यसँगै संसार ध्वस्त हुने र नयाँ संसार श्रृजना हुने विश्वास गरिन्छ । कलि युग ४ लाख ३२ हजार वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो युगको समय पनि शास्त्र अनुसार फरक छन् । १२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ ।
कलियुग चौथो युग हो । शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास लिइन्छ ।
पुराणहरुका अनुसार कलियुगको अन्त्य भने भगवान विष्णु कलियुगको अन्तिममा कल्किको रुपमा देवदत्त नाम गरेको घोडामा चढेर संसारमा आउने र पापिहरुको विनाश गर्नेछन् । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ र एजेन्सीबाट साभार
नेपालमा यति सस्तोमै ४ कोठे आकर्षक घर बन्ने, यो कम्पनीलाई दिनुस् बनाउने जिम्मा
रंगशालामा डोजर चलाउने प्रकाश कडेंल प्रहरीबाट छुटेपछि पहिलो पटक मिडियामा,सके कारवाही गरेर देखाउन धुर्मुस–सुन्तलीलाई चेतावनी(भिडियो)
पदको दुरुपयोग: सेनाको हेलिकोप्टरमा श्रीमती लिएर मन्दिर दर्शनमा रक्षा सचिव रश्मिराज पाण्डे !